छुटाउनुहोला है ? रुरु जलविद्युत्को आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन « लुम्बिनी सञ्चार
छुटाउनुहोला है ? रुरु जलविद्युत्को आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
प्रकाशित मिति :6April, 2021 12:34 pm
काठमाडौं । रुरु जलविद्युत् लिसिमटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । आज चैत्र २४ गते मंगलबार कम्पनीको आइपीओमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदलन दिन सकिने सेयर बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ ।
कम्पनीले अंकितमूल्यमा २० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर १२० रुपैयाँ दरले कुल ४ करोड ८९ लाख २४ हजार ७२० रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ ।